ရှောင်လန်တီ ရေလှောင်တမံက မြစ်ဝါမြစ်အတွင်းရေပို စွန့်ထုတ်မှု ပြုလုပ် - Xinhua News Agency
ရှောင်လန်တီ ရေလှောင်တမံက မြစ်ဝါမြစ်အတွင်းရေပို စွန့်ထုတ်မှု ပြုလုပ်
၂၀၂၂ ပေကျင်းအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံး နှင်းလျှောစီးလမ်းကြောင်း
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးသုတေသနတွင် တရုတ်နှင့် မလေးရှား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဟု မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြော
အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးက နှစ်နိုင်ငံ သမ္မတများ၏ဆွေးနွေးမှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် တိုက်တွန်း
တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း မှတစ်ဆင့် လာအိုနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်များချိတ်ဆက်
အစ္စရေးနိုင်ငံတွင်သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း ၁,၉၀၀ ရှိ စက်မှုအဆောက်အဦ အကြွင်းအကျန်များနှင့် သင်္ချိုင်းဟောင်းကြီးတစ်ခု တူးဖော်တွေ့ရှိ
ကျန်းကျိုး၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယ အရှည်ဆုံးမြစ်ကြီးတစ်စင်းဖြစ်သည့် မြစ်ဝါမြစ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသော ရှောင်လန်တီရေလှောင်တမံသည် ရေလွှမ်းမိုးသည့်ကာလအတွင်း ရေပိုများစွန့်ထုတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သော စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ကတည်းက အဆက်မပြတ်မိုးရွာသွန်းမှုများကြောင့် မြစ်ဝါမြစ်တွင် ရေလွှမ်းမိုးမှု ၃ ကြိမ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ရေလှောင်တမံ ၏ရေအမှတ်မှာ ရေလှောင်တမံကို စတင်တည်ဆောက်ပြီးကတည်း က အမြင့်ဆုံးရေအမှတ်အဖြစ် ၂၇၃.၅ မီတာသို့ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က စံချိန်တင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ရှောင်လန်တီရေလှောင်တမံ သည် မြစ်ဝါမြစ်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည့် အကြီးဆုံး ရေလှောင်တမံအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ရေလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ရေခဲပြင်များထိန်းချုပ်ရန်၊ သောင်တူးခြင်း နှင့် ရေ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုနှင့် စွမ်းအင်များဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
Xiaolangdi Reservoir on Yellow River discharges water
ZHENGZHOU, Oct. 15 (Xinhua) — The Xiaolangdi Reservoir on the Yellow River, China’s second longest river, is discharging water during the flood season.
The Yellow River&nbsp; has seen three floods since Sept. 27 due to continuous rainfall. The water level of the Xiaolangdi Reservoir reachedarecord high of 273.5 meters last week&nbsp; since the dam was built.
Xiaolangdi Reservoir is the largest of its kind on the Yellow River, designed for flood and ice control, dredging, and ensuring water supply and power generation.
လူပေါင်း ၄၇ ဦးသေဆုံးခဲ့သည့် အာဖဂန်ဗလီဖောက်ခွဲမှု လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း အစ္စလာမ်မစ်စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ဆို
အီရန်နိုင်ငံက ခေတ်မီ ပြည်တွင်းဖြစ်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်များ စမ်းသပ်နေ